सीप सिक्दै कारागारका कैदीबन्दी ! – इन्सेक
सीप सिक्दै कारागारका कैदीबन्दी !
दार्चुला ०७६ जेठ १९ गते
जिल्ला कारागार दार्चुलाका कैदीबन्दी सिलाई कटाई सीप सिक्न थालेका छन् । जिल्ला कारागार शाखा दार्चुलाले जेठ ज्ञड गतेदेखि १७ दिने सिलाई कटाई सीप तालिम सञ्चालन गरेपछि उनीहरू सीप सिक्न थालेका हुन् ।
कारागारको कैदी जीवन सकेपछि घर फर्कँदा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि सिलाई कटाई तालिम सञ्चालन गरिएको जिल्ला कारागार दार्चुलाका निमित्त जेलर मानबहादुर खडायतले जानकारी दिए ।
‘खाली समयमा सीप सिक्दा उनीहरूको बाँकी जीवनलाई सघाउ पुग्ने गरी हरेक वर्ष सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । गत वर्ष होजियारी तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । होजियारी तालिम लिएकाहरूले यो वर्ष राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।’–खडायतले भने ।
कारागार व्यवस्था विभागबाटै हरेक वर्ष तालिम तोकिएर आउँछ । सोही कार्यक्रम अनुसार कारागारका कैदीहरूलाई व्यवसाय मुलक तालिम दिइने गरेको उनको भनाई छ ।
सिलाई कटाई तालिममा १० जना कैदीबन्दीको सहभागिता रहेको छ । तालिम सञ्चालनको लागि दुई ओटा मेसिन, एउटा पिको मेसिन खरिद गरिएको छ ।
दुई समूहमा तालिम सञ्चालन गरिएको प्रशिक्षक अमरसिंह बोहराले जानकारी दिए । पाँचपाँच जनालाई एक पटक तालिम दिन सुरू गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म तथा दोस्रो चरणमा दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म सञ्चालन गरिएको छ ।
कैदीबन्दीको सीप सिक्ने चाहना अनुसार तालिम दिन सुरू गरिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । ‘तालिममा सहभागी मध्ये धेरैलाई थोरैथोरै सिलाई गर्न आउँछ भने केही पूरै नयाँ छन् । नयाँलाई मेसिन चलाउनेदेखि धागो राख्ने सम्मको सीप सिकाउने गरिएको छ ।’–बोहोराले भने ।
कारागारले कैदीबन्दीको चाहनाअनुसार सीप विकास तालिम सञ्चालन गरेपछि उनीहरू खुसी छन् । ‘हाम्रो लागि तालिम आवश्यक थियो ।’–कैदी धनसिंह खातीले भने–‘भित्र दिनभरी त्यतिकै बस्नु भन्दा सीप सिक्दा नकारात्मक कुरा बिर्सन मद्दत पुग्छ ।’
‘कारागारभित्र सिलाई कटाई सीप सिकेपछि आफ्नो दैनिक चलाउनलाइ सहज हुने विश्वास जागेको छ ।’–अर्का कैदी केशवसिंह धामीले भने ।
सामान्य आफ्नो लुगाफाटोमा सिलाई हाल्न पनि सिलाई आवश्यक थियो । अहिले उनीहरूले मेसिन चलाउने तौरतरिका थाहा पाएका छन् ।
प्रशिक्षक बोहराका अनुसार उनीहरूलाई कपडाका कटिङ, मेसिन चलाउन, सामान्य सिलाई सिकाउन समय हुन्छ । १७ दिनमा पूरै सीप सिकाउन नसकिएपनि उनीहरूको मेसिन चलाउन र आफ्नो लुगा फाटोमा सिलाई राख्न सक्छन् । त्यसपछि पनि कागारमै मेसिन रहने हुँदा अभ्यास गर्दै जाँदा सीप सिकिने उनको भनाई छ ।
‘एक महिनाको तालिम भइदिएको भए पूरै सीप सिकाउन सकिन्थ्यो, समयावधि कम भयो । तैपनि उनीहरूलाई आधारभूत सीप सिकाउन प्रयत्नरत छु ।’–बोहराले भने ।
हाल जिल्ला कारागार दार्चुलामा ३४ कैदी र १२ बन्दी गरी ४६ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमा एक जना महिला कैदी रहेका छन् ।
भेटघाट कक्ष स्थापना गर्न माग
जिल्ला कारागार दार्चुलाका कैदीबन्दीहरूले आफ्ना आफन्तसँग भेटघाट गर्नको लागि कक्ष स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
कारागारमा आउने आफन्तहरूलाई गेट भित्रैबाट मात्र भेट्ने विद्यमान अवस्था रहेको भन्दै अलग्गै भेटघाट गर्ने कक्ष स्थापना गर्न माग गरेका हुन् ।
‘अन्य क्षेत्रमा कैदीबन्दीहरूको लागि छुट्टै भेटघाट गर्न सकिने कक्ष निर्माण गरिएको हुन्छ । हाम्रोमा आफन्त सँग खुलेरै कुरा गर्नको लागि अलग्गै कक्षको आवश्यकता छ ।’–कारागारका चौकीदार मोहनलालसिंह ठगुन्नाले भने । अहिलेको च्यानल गेट भित्रबाटै आफन्तसँग भेटघाट गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
कारागारको एक छेउमा आफन्तसँग भेटघाट गर्ने कक्ष निर्माणको लागि पहल गरिदिन इन्सेक प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीसँग आग्रह गरेका हुन् ।
‘कुन क्षेत्रबाट हुन्छ, थोरै सहयोग पाइएमा भेटघाट कक्ष निर्माण हुनेछ । यसको लागि बजेट आवश्यक छ ।’–ठगुन्नाले भने ।
जिल्ला कारागार दार्चुलाका जेलर मानबहादुर खडायत कैदी बन्दीको लागि भेटघाट कक्ष आवश्यक भएपनि बजेट अभाव रहेको बताउँछन् । ‘ठाउँ छ । तर बजेट छैन ।’–उनले भने ।